अचम्मकाे मन्दिर जहाँ खेलाैँना हवाइजहाज चढाएपछि आफुले चाहेको देश जाने भिसा मिल्छ | Makalukhabar.com
अचम्मकाे मन्दिर जहाँ खेलाैँना हवाइजहाज चढाएपछि आफुले चाहेको देश जाने भिसा मिल्छ
फागुन २६, काठमाडौँ । विदेश भ्रमण गर्न चाहने जो कोहीलाई भिसा पाउन त्यति सजिलो छैन् । रोजगारकै लागि विदेश जाने तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरुको लागि पनि विदेश जान धेरै संघर्ष गर्नु पर्छ । तर भारतमा भने विदेश जानको लागि भिषा पाउन पुजा गर्नुपर्ने एक मन्दिर रहेको छ । आफुले चाहेको देशमा जानको लागि मानिसहरु उक्त मन्दिरमा पुजा गर्ने गर्छन् ।
भारतको तेदंगना राज्यमा रहेको मन्दिरको नाम चिल्कुर बालाजी हो । मन्दिरमा गएर पुजा गर्दा मन्दिरको वपरिपरि घुम्ने र आफु कुन देशमा जान चाहेको हो त्यो देशको नाम लिएर खेलौना हवाइजहाज चढाएमा उक्त देशको भिसा पाइन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । मन्दिरमा ११ पटक परिक्रमा गरेर आफुलाई आवश्यक परेको कामको कुरा गरेमा पनि सोचेको काम पुरा हुने विश्वास रहेको छ ।
५ सय वषै पुरानो यो मन्दिरमा आफुले सोचेको कुरा पुरा भएका भक्तहरु आएर एक सय ८ पटक परिक्रमा गर्ने गर्छन् । आफुले चाहेको देशमा जान मानिसहरुलाई निकै कष्ट गर्नुपर्छ तर भारतमा रहेको चिल्कुर बालाजीको मन्दिरमा खेलौना जहाज चढाएमा जान चाहेको भिसा मिल्ने गरेको भक्तजनहरुमा विश्वास छ । एजेन्सी
क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा डिएनए र आरएनए परीक्षण
दुईजनाको सहमतीपछि मात्र खोलिने अचम्मकाे कण्डम
जेठ ९ । अर्जेन्टिनाको यौन खेलौना ‘सेक्स टोय’ बेच्ने कम्पनी तुलिपनले एउटा यस्तो कण्डम पेश गरेको छ जसलाई खोल्नका लागि दुई व्यक्तिको सहमतीको आवश्यक पर्छ । अथार्त्, प्याकेट खोल्नका लागि एकै समयमा चारवटा पोइन्ट (ठाउँ) मा दबाउनुपर्छ । ‘कन्सेन्ट कण्डम’ नाम दिइएको यो कण्डमको प्याकेट... जारी राख्नुहोस...
अचम्मको आलु जसलाई खाँदा भईन्छ सधैँ जवान
जेठ ८ । आलुको सेवनबाट दिर्घायु बन्ने खबर कहिल्यै सुन्नु भएको छ ? यदि छैन भने यो खबरले तपाईको आयु नै बढाउन मद्धत गर्नेछ । प्रसंग हो दिर्घायु बनाउने आलुको । जसलाई बैज्ञानिकहरुले केही वर्ष खर्चेर सफल परिक्षण गर्न सषम भएका छन् । टेस्ट ट्यूबमा तयार गरेर पछि माटोमा रोपिने यो आलु वैजनी रंगको छ । सामान्यतय... जारी राख्नुहोस...
पब्जी खेल्न नजाँन्दा श्रीमतीले डिभाेर्स मागेपछी
जेठ ७,। अहिले पब्जी मोबाइल खेलको बारेमा थाहा नपाउने कमै होलान् । पब्जी खेल अहिले पछिल्लो पुस्तामा निकै लोकप्रिय भैरहेको छ । पब्जीकै कारण भारतमा अहिलेसम्म १० भन्दा बढी घटना घटिसकेको छ । त्यसैगरी १६ जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ । गुजरातमा प्रतिबन्धपछि पनि पब्जी खेलेका कारण १६ जनालाई गिरफ्तार गरिएको थियो... जारी राख्नुहोस...
काे हुन् यी बालिका जाे घोडा चढेर स्कुल जाने आउँने गर्छिन्
जेठ ६ । स्कूलको आफ्नो दिन कसलाई याद हुँदैन र ? तपाई हामी पनि हिँडेर या बस, मोटरसाइकल वा साइकल चढेर स्कूल गएका छौ। अहिले पनि यस्तै नै छ। तर भारतकी एक विद्यार्थी दिनहुँ घोडा चढेर स्कूल जान्छिन्। हावाको गतिमा दौडी रहेको छ, घोडा अनि यस माथि सवार छिन् एक स्कूलकी छात्रा। केही दिन अगाडी देखि यो भिडियोलाई... जारी राख्नुहोस...
यस कारण तौल घट्छ पूर्व मायालुलाई सम्झेर रुदाँ
जेठ ५ । एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । तर कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दबाउन खोज्छन्, यसलाई उजागर गर्न लजाउँछन् पनि । तर यदि भावनात्मक रुवाईले तपाईंलाई तौल घटाउन सहयोग गर्छ भन्दा कस्तो लाग्ला ? यो सुन्ने बित्तिकै कतिलाई लाग्न सक्छ कि आफूले थुप्र... जारी राख्नुहोस...
तपाईलाई करोडपती ज्वाई बन्न मन छ ? त्यसो भए यी शर्तहरु पुरा गर्नुहोस्
जेठ ३ । थाइल्याण्डका करोडपति व्यापारी अनोन्त रोथांगले आफ्नी छोरीको विवाहको लागि अनौठो शर्तहरु अगाडि सारेका छन् । छोरीको विवाहको लागि उनले दिएको अनलाइन विज्ञापनका अनुसार, उनको छोरीलाई विवाह गर्ने केटाले ३,१३,५०० डलर नगद तथा उनको व्यवसायमा मालिक बन्ने मौका पाउनेछन् । तर यसका लागि केही शर्तहरु चाहिँ... जारी राख्नुहोस...
...जसले मृत फ्याउराको पेटबाट चार बच्चा निकालेर जीवनदान दिए
बेलायतका एक २४ वर्षीय क्रिस रोल्फले मृत फ्याउराको पेटबाट ४ बच्चा निकालेर जीवनदान दिएका छन् । रातको समयमा घर बाहिर कारमा हिँडिरहेका रोल्फले जंगलको बाटो छेउमा मृत फेला परेको फ्याउराको पेट चिरेर बच्चा निकालेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘म रातको समयमा कारमा हिँडिरहेको थिएँ । बाटो छेउमा घाइते फ्याउर... जारी राख्नुहोस...
याे हाे सुनको ट्वाइलेट जसलाई सर्वसाधरणले पनि उपभोग गर्न पाउँने
जेठ २ । हामि सबैलाइ पक्कै अचम्म लाग्न सक्छ १ कहिल्यै तपाईले सुनको चर्पी देख्नु भएको छ रु हामिले बिभिन्न धातु तथा माटो बाट बनेको चर्पी त देखेका र्छा तर सुनको चर्पी भने अवस्य देखेका छैनौ ।यस्तै बेलायतको ब्लेनहाइम प्यालेसमा सुनको ट्वाइलेट कमोड जडान गरिँने भएको छ । बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री विंस्टन चर... जारी राख्नुहोस...
अचम्मकाे संस्कार जहाँ छोरीलाई आमाको सौता बनाईन्छ
जेठ १ । विवाहको प्राचीन कालदेखि चलिआएको एउटा संस्कार हो । विश्वकै पहिलो लिखित ग्रन्थ मानिने ऋग्वेदमा सूर्य र सूर्याको प्रसङ्गमा विवाह संस्कारका सबै वैदिक मन्त्र उल्लेख गरिएका छन् । विवाह संस्कारसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलाप ऋग्वेदमा उल्लेख छन् । अर्थात् विवाहको चलन त्यस बेला पनि प्रचलित थियो । चार व... जारी राख्नुहोस...
रूखबाट निरन्तर पानी तप्किन थालेपछी
बैशाख ३१ । गएको शुक्रबार अस्ट्रेलियाको पर्थमा अचम्मको घटना भयो। पर्थको बाहिरी भागमा पर्ने एक स्थानमा एउटा रूखबाट निरन्तर पानी तप्किन थाल्यो। युकालिप्टस अर्थात् मसलाको रूखबाट यसरी पानी तप्किँदा धेरैले यसलाई रूख रोएको ठाने। यसलाई ईश्वरको चमत्कार ठानी रूखको फेदमा सयौँले प्रार्थना गरे। ‘रोइरहेक... जारी राख्नुहोस...